Tababar Gaaban Oo Loo Qabtay Shaqaalaha Xafiiska Waxbarashada DDSI - Cakaara News
Tababar Gaaban Oo Loo Qabtay Shaqaalaha Xafiiska Waxbarashada DDSI
Jigjiga(cakaaranews)Isniin 8da May 2017. Tababar ay si wada jir ah usoo agaasimeen Wasaarada waxbarashada JDFI iyo xafiiska waxbarashada DDSI geedisocodkiisa shati-bixinta iyo dib u cusboonaysiinta xirfada barayaasha islamarkaana ujeedadiisu tahay fahanka habraacyada nidaamka shatibixinta, nidaamka loomiisaamo natiijada imtaxaanka, loona qabtay dhamaan shaqaalaha xafiiska waxbarashada DDSI ayaa kaqabsoomay hoolka shirarka ee isla xafiiska.
Hadaba, tababarkan ayaa waxaa ugu horayn furay Wasiirka Xafiiska Waxbarashada DDSI mudane Ibraahim Aadan Mahad oo sheegay in tababarkani yahay mid larabo in fahan buuxa laga siiyo dhamaan shaqaalaha nidaamyada iyo habraacyada shati bixinta kadib marka lamiisaamayo natijada imtaxaanka ee laga qaado macalimiinta, maamulayaasha, iyo waliba kormeerayasha ka hawlgala dugsiyada deegaanka. Wuxuuna intaa kudaray in casharada ay bixinayaan khabiiro ka socda wasaarada waxbarashada JDFI. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhamaan shaqaalaha kula dadaarmay in tababarkan gaaban ay shaqaalauhu si fiican uga faaiidaystaan casharada.
Dhanka kale, Gadhwadeenka Geedisocodka Shatibixinta iyo Dib U cusboonaysiinta Xirfada Barayaasha iyo Hogaaminta Waxbarashada mudane Mukhtaar Ibraahim Muxumed oo isna tababarkan kahadlay aya sheegay in tababarkan lagu qaadanayo casharo muhiim u ah dhamaan shaqaalaha. Wuxuna xusay in larabo in fahan buuxa aan kawada qaadano heerarka darajooyinka laga qiimeeyo barayaasha, maamulayaasha, iyo kormeerayaasha iyo waliba nidaamka kaydinta galka waxqabadka shaqsi ee looyaqaano (Portfolio)
Iskusoowada duuboo tababakan oo ahaa mid ay udhanaayeen shaqaalaha xafiiska waxbrashadu ayaa lafilayaa in soogabagaboobo bari hadu Allah yidhaahdo..